Wednesday June 08, 2016 - 05:48:14 in Articles by Super Admin
Daawo Dhiigshiil oo xaflad weyn u qabatay Sanadguuradda xuska 20 Ginbot Ethiopia iyadoo garoon weyn u kireeysay dabaaldega cadawga ummadda Soomaaliyeed ee shalay iyo doraad afartan qof oo Somalia ku xasuuqay Gaashaamo. Aaween Soomaalidii Dhiigshiil difaaci jirtay?
Aaween Isaaqii Dhiigshiil difaaci jiray?
Aaween dadkii aaminsanaa ineysan Dhiigshiil aheyn cadawga Ummadda Soomaaliyeed?
Shirkad ganacsi oo Shabaab ka dhex shaqeeysato miyaa Ethiopia u sameeyn kara xaflad heerkaan gaarsiisan? hadda ma ogaateen sababta Ethiopia awoodda Somaliland ula wareegtay iyo cidda u sahashahay? ma fahamteen cidda Ragga iyo dumarka Ogaadeen in xabashidda loo dhiiba ka dhameeyay Maamulka Hargeysa?
Haddii aad muuqaalkaan daawatay malaga yaabaa inaad Dhiigshiil u sii ahaato macaamiil?
Maxeey fali doonaan wiilasha iyo gabdhaha Ogaadeen ,kuwa Habargidir iyo Isaaq ee ehelkoodii xabashidu dhameeysay?
Ciidanka Xukumadda Ethiopia intee kun oo qof ayey Muqdisho ku dileen intii u dhaxeeysay 2007 ilaa 2009 ? dadkaas la dilay ehelkooda hadeey muuqaalkaan daawadaan maxeey dareemi doonaan?
Ma xaqiiqsatay cidda jiritaankeeda Somalinimo ka soo horjeedo ee xabashida dalkeena u gacangelineyso?
Ma xaqiiqsatay iney Al-Shabaab iyo Ethiopia isku xiran yihiin iyo cidda ka shaqeeysay isku xirnaantooda?
Anigu maalintaan dhintaad ka reeysan doontaan warkeeyga faraha badan laakiin waxaan cod dheer idinku leeyahay SOOMAALIYEEY TOOSA?